Sida loo helo ogeysiis marka iPhone -kaaga si buuxda loo dallaco | Wararka IPhone
Isticmaalayaasha qaarkood waxaa laga yaabaa inay xiiso u leedahay inay ogaadaan marka iPhone ama iPad (aalad kasta oo ah IOS ama iPadOS ay ansax tahay) si buuxda ayaa loo dallacaa iyadoo ku xiran duruufaha, haddii aad sugayso inaad isticmaasho, ama haddii aad si fudud u rabto inaad ka warqabto hannaanka culeys.
Si kasta oo ay tahay sababta aad u isticmaaleyso, Waxaan ku tusinaynaa sida loo helo ogeysiis marka iPhone -kaaga ama iPad -kaaga 100% lagaa qaado. Xeelad aad u fudud oo nolosha u fududayn karta isticmaaleyaal badan, markaa fiiri muuqaalkan xiisaha leh maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay adiga xiiso kuu leedahay.
Sidee bay noqon kartaa haddii kale, si aan u fulinno hawshan waxaan adeegsan doonnaa arjiga Tuuryo, qalab Apple ah oo fududeyn kara hawlo badan oo maalmeed ah iyo in isticmaaleyaal badan aysan si qoto dheer u aqoon. Halkan gudaha Actualidad iPhone ayaan marar badan kaala hadalnay maxaynu u malaynaynaa inay yihiin gaabinnada ugu xiisaha badanFiiri iyaga sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaad hesho mid aad u aragto inuu aad waxtar u leeyahay.
Si loo habeeyo feejignaan ama ogeysiis marka iPhone -kaaga 100% lagaa qaado waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda:
Ka fur barnaamijka gaagaaban qalabkaaga macruufka ama iPadOS oo dooro badhanka hoosta la yiraahdo iswada.
Guji abuur otomaatig u gaar ah.
Hoos ugu dhaadhac fursadaha kala duwan ilaa aad ka heshid mid tilmaamaysa heerka baytariga. Riix si aad u bilowdo hagaajinta dariiqaaga gaaban oo aad u isticmaasho mishiinka 100%.
Guji ku dar ficil, oo dooro dhawaaji ka dibna gudaha ku xiga.
Waxaad durba si buuxda u habaysay goobtan. Sidan oo kale iPhone -ku wuxuu soo saari doonaa cod, in kasta oo aad sidoo kale u beddeli karto ikhtiyaarka aad ku hesho nooc ka mid ah ogeysiiska, Tani waxay ka dhigan tahay, tusaale ahaan, haddii aan leenahay Apple Watch, waxay nagu soo wargelin doontaa iyada oo la adeegsanayo ogeysiiskaas oo aan hore u haysannay iPhone -ka si buuxda loo dallacay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo helo ogeysiis marka iPhone -kaaga si buuxda loo dallaco